आज तपाईको राशिफल : २०७७ जेठ २४ गते - Sagarmatha Online News Portal
आज वि.सं. २०७७ जेठ २४ गते शनिवार । तदनुसार इ.स. २०२० जुन ६ तारिख । नेपाल संवत ११४० तछलागा । आषाढ कृष्णपक्ष । प्रतिपदा, २३ः३९ उप्रान्त द्वितीया ।
प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपरे पनि विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन् र मनग्गे लाभ हुनेछ । भौतिक साधन जुट्नाले दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ । सोखले फजुल खर्च भने बढाउन सक्छ । साँझतिर यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । पुरुषार्थी काम सिद्ध गर्ने समय छ । प्रेम र मित्रताको बन्धन पनि कसिन सक्छ । व्यापारमा फाइदा हुनेछ ।
तारिफयोग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ । दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । विशेष अध्ययन तथा नयाँ ज्ञानको खोजीमा समय बित्नेछ । गुरुजनको सहयोगले बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा अग्रस्थान हासिल गर्न सफल भइनेछ । रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ । साँझतिर शत्रुले दुस्ख दिन सक्छन् । मिहिनेतले राम्रो प्रतिफल दिलाउनेछ ।
जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ । केही समय अरूका लागि उपयोग भइएला । परिवारजनको सहयोगले काम बनाउन भने सकिनेछ । टाढिएका आफन्त नजिकिनेछन् । विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ । लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ । साँझतिर विशेष फाइदा हुनेछ । अध्ययनको गतिले थप उचाइमा पुर्याउन सक्छ ।
हिलेको सफलताले महत्त्वाकांक्षा बढाउनेछ । विभिन्न अवसर पनि आउनेछन् । तारिफयोग्य काम सम्पादन हुनाले प्रशंसकहरू बढ्नेछन् । विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुनेछ । आकर्षक उपहारले उत्साह जगाउनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् र नयाँ काम पाइनेछ । पारिवारिक जमघटले आनन्द दिलाउनेछ । साँझतिर लेखन तथा सिर्जनात्मक काममा रुचि बढ्नेछ ।